FAQs - Ningbo Sine Magnetic Co., Ltd
Sintered Neodymium ngumazibuthe
Yesondo Neodymium ngumazibuthe
Equipment Isihluzi Magnetic
Tags Igama Magnetic
Button manzi Magnetic
Motor Assemblies Magnetic
Motor / Generator ngumazibuthe
Abenzi boluvo / Ijija iimagnethi
Yintoni izidingo zakho?
Amaxabiso ethu ukutshintsha ngokuxhomekeke unikezelo kunye neminye imiba emarikeni. Siya kuthumela kuwe uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva inkampani yakho uqhagamshelane nathi ukufumana ingcaciso engaphezulu.
Ingaba unayo ubungakanani order ubuncinane?
Ewe, siya kufuna ukuba zonke ii-odolo ngamazwe ukuba eqhubekayo ubuncinane ubungakanani order. Xa ngaba ukhangela ukuba angathengisa kodwa ngamanani amancinci kakhulu, sicebisa ukhangela iwebsite yethu
Ngaba OEM okanye ODM?
Ewe, sibe igqiza elomeleleyo abasakhulayo. Ezi mveliso kwenziwa isicelo sakho.
Ngaba unikeze amaxwebhu afanelekileyo?
Ewe, singakwazi ukubonelela amaxwebhu uninzi kuquka Iziqinisekiso Uhlalutyo / akahambelani; inshorensi; Imvelaphi, kunye namanye amaxwebhu kumazwe apho kuyimfuneko.
Yintoni i-avareji ixesha phambili?
Kuba iisampuli, ixesha yipeyinti malunga 7 iintsuku. Kuba production mass, ixesha phambili ziintsuku 20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo kusebenza xa (1) siye safumana idipozithi yakho, kwaye (2) sinayo imvume yakho yokugqibela imveliso yakho. Ukuba maxesha ethu ukhokelo azisebenzi nge umhla yakho, nceda uye phezu iimfuno zakho ukuthengisa yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukubonelela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi akwazi ukwenza loo nto.
Ziziphi iintlobo indlela ekuhlawuliswa ntoni na ukwamkela?
Uyakwazi ukwenza intlawulo kwi-akhawunti yethu yebhanki, Western Union okanye PayPal:
30% imali kwangaphambili,-70% eseleyo nxamnye ikopi B / L.
Yintoni isiqinisekiso mveliso?
Thina iwaranti izinto zethu nokusetyenzwa. Ukuzinikela kwethu ukuba ukwaneliseka kwakho iimveliso zethu. Xa iwaranti okanye akunjalo, oko inkcubeko yenkampani yethu zokwazisa kunye nezo zokusombulula yonke imiba nabaxhamli lokwaneliseka wonke
Ngaba akuqinisekisi unikezelo ekhuselekileyo nenokhuselo kweemveliso?
Ewe, sisoloko ukusebenzisa kwizinga eliphezulu kumazwe ukuphakheja. Kwakhona sisebenzisa nokupakisha ingozi ezikhethekileyo izinto ezinobungozi asemthethweni keli yokugcina abandayo lobushushu izinto eziyimfihlo. zokubopha zeengcali kunye neemfuno ivale non-esezantsi kungaba kukho intlawulo eyongezelelweyo.
Njani imali lokuthumela?
Iindleko yokuthumela kuxhomekeka kwindlela okhetha ukufumana impahla. Express ngokwesiqhelo eyeyona ngokukhawuleza kakhulu kodwa ndlela kuyabiza. Yi seafreight sesona sisombululo kakhulu imali enkulu. Ngqo amazinga zezomoya singakwazi kukunika kuphela xa siyazi iinkcukacha mali, ubunzima kunye nendlela. Nceda uqhagamshelane nathi ukufumana ingcaciso engaphezulu.
Ofuna ukusebenza US?
Phone: +86 574 82809158
Ukuba unemibuzo malunga iimveliso zethu okanye pricelist, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24.